Wadaad Soomaali ah oo lagu dilay dalka Australia iyo faah faahinta dilkiisa. | Qurbaha.Net :: Isha Wararka Soomaalida Qurbaha
Home Somali News Wadaad Soomaali ah oo lagu dilay dalka Australia iyo faah faahinta dilkiisa.
Wadaad Soomaali ah oo lagu dilay dalka Australia iyo faah faahinta dilkiisa.
Qurbaha.net Melbourne :- waxaa la helayaa faah faahin ku saabsan dilka wadaad Soomaali ah oo lagu dilay magaalada Melbourne ee dalka Australia iyadoo qaar badan oo ka mid ah dadka Soomaalidana ay ka tacsiyeeyeen.
Sida laga soo xiganayo Soomaalida ku nool magaalada Melbourne waxaa halkaasi ka dhacay dil lagu fuliyay mindi kaas oo loo geysay wadaad Soomaali ah oo la sheegay in uu dadka bari jiray quraanka iyo tacliinta kale.
Marxuumkaan oo lagu magacaabi jiray Sheekh Mohamed Xoogsade ayaa la sheegaya in uu dilay nin madaxa looga jiro oo ka mid ahaa jameecada uu wax bari jiray waxaa la sheegayaa in dilkiisa uu u adeegsaday min taas oo uu dhowr mar ku dhuftay.
Ninka dilka geystay ayaa la sheegay in ay gacanta ku dhigeen ciidamada booliska ee wadankaas waxaana la geeyay goob baaritaan loogu sameynayo.
Ehelada iyo dhamaan dadka Soomaalida ah ee aadka ugu dhawaa wadaadka la dilay ayaa ka tacsiyeeyay geerida xanuunka badan ee ka dhacday magaaladaas.
Previous articleQeyb ka mid ah Soomaalida Norwey oo qaadatay Talaalka Coronaveirus.
Next articleDad ka carooday Muwaadin Soomaali ah oo lagu Toogtay Minneapolis